MUQDISHO, Soomaaliya - Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada Milateriga dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa Caawa lagu dilay Xaafad ka tirsan magaalada Muqdisho, ee Caasimadda Soomaaliya.
Goobjooge la hadlay Warsidaha Garowe Online ayaa xaqiijiyay in Koox bastoolado ku hubaysan ay Xaafadda Maclin Nuur ee degmada Dharkeenlay ku dileen Sarkaalka oo lagu magacaabi jiray Maxamed Xasan Ciise.
Maxamed ayaa lagu toogtay meel ku dhaw Hoygiisa kadib markii jidka u galeen labo dhalinyaro ah, oo bastoolado ku hubaysan, kuwaasi oo isaga ku daba jiray markii uu shaqadiisa kasoo laabanayay, sida ay sheegeen Saraakisha Booliska degmada.
Kooxda dilka fulisay oo loo maleynayo inay katirsan yihiin Al Shabaab ayaa goobta isaga baxsatay, iyadoo sida caadada ah ay soo gaareen Ciidamada dowladda oo sameeyay baaritaan aan cidna lagu soo qaban.
Waa dilkii labaad oo tan iyo xalay ka dhaca isla Xaafadda Maclin Nuur ee caawa lagu dilay Sarkaalka Militeriga dowladda Federaalka Soomaaliya kamid ahaa, waxaana falkan uu qeyb ka yahay dilal kusoo kordhayay mudooyinkii dambe magaalada.
Xalay fiidkii Askari katirsanaa Ciidamada Xasilinta iyo qof shacab ah ayaa lagu dilay Isgoyska Towfiiq ee degmada Yaaqshiid, waxaana loo qabtey falkaasi dhowr qof oo laga shakiyay. Halkan ka akhri.
Amniga Muqdisho ayaa mudooyinkii dambe noqday mid faraha kasii baxaya kadib markii...